Fitsapana ho an'ny mpamorona: andrana ny fahaizanao | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Graphic Design, Famolavolana tranonkala
Mahaiza mamorona endrika tsara na tsia dia fanontaniana sarotra valiana. Ny fanombatombanana, mifehy tanteraka, dia tokony hatolotry ny olona iray, izay mahalala tsara ny firaisana, hanombatombana ny fahaizantsika miresaka, ankoatry ny hafa.
Raha mbola tsy misy mpitsara famolavolana toy izany, ny hany zavatra azontsika andrasana dia ny fahaizantsika teknika bebe kokoa: manandrana manatanteraka fanazaran-tena amin'ny fahasarotan'ny fandaharanasa famolavolana, manolotra vahaolana vaovao ho an'ny fitaovana efa misy (famerenana endrika ny marika malaza. ..). Fa tsy izany ihany: azontsika atao ihany koa ny mizaha toetra ny fahaizantsika manaitaitra bebe kokoa, toy ny fahitantsika ny loko sy ny "masontsika tsara" amin'ny famaritana. Miaraka amin'ny fitsapana ho an'ny mpamorona entinay anio ianao.
KernType sy Color, ny fitsapana ho an'ny mpamorona
Arisen ao anatin'ny làlana an-tserasera natao ho an'ny mpandahatra fandaharana, ireo fitsapana roa izay asehontsika anao anio dia mahazo tanjaka sy laza eo amin'ireo mpamorona. Angamba mahazatra kokoa ny mahita iray fitaovana an-tserasera hizaha toetra ny fahitantsika loko; fa ny tsy mahazatra dia ny mihazakazaka amina karazana lalao ahafahantsika mahafantatra ny fahaizany nampianatra antsika amin'ny masontsika kerning.
Mbola tsy fantatrao izay atao hoe kerning? Ity teny ity dia ampiasaina hanondroana ny elanelana misy litera roa. Amin'ny lahatsoratra iray hafa dia miresaka lalina kokoa momba azy isika, raha tianao ny mijery azy alohan'ny hitohizany. Misaotra an'i KernType, azontsika atao ny manombatombana ny fahaizantsika amin'ny fomba tena tsotra. Tsindrio ny taratasy izay te-hifindra ary tsindrio ny zana-tsipìka havia na havanana amin'ny kitendry hanamboarana antsika. Handalo andian-teny maromaro izahay, izay hanehoan'ilay fampiharana azy ireo ny vahaolana marina ary ny isa azontsika. Amin'ny farany, hahazo isa isika amin'ny 100. Ny fandaniana dia 50, 90 no isa tena tsara ary 100… fahalavorariana!
Somary manahirana kely kokoa ny Color, satria izy ireo dia sedra amin'ny ora. Tsy maintsy mitantana mifanaraka amin'ny loko (na ny loko) izay hasehon'ny fampiharana amintsika, manodinkodina ny fotoantsika manodidina ny faribolana chromatic. Manomboka mihasarotra ny fitsapana rehefa tsy maintsy mitady loko 3 isika amin'ny fotoana iray ...
Ahoana ny hevitrao momba ireo fitsapana ireo? Inona ny naotinao?
Fanazavana fanampiny - Kerning, hevitra tokony ho fantatry ny mpamorona sary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fitsapana ho an'ny mpamorona: ataovy andrana ny fahaizanao
Naiknatt dia hoy izy:
88 ... tamin'ny farany dia tsy nahomby mihitsy aho ...
Valiny tamin'i Naiknatt
Ny herin'ny HTML5 tsy mampino
Lohahevitra 6 mamaly maimaimpoana ho an'ny gazety nomerika anao